ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများနှင့်အရေးအသားဆောင်းပါးများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Krylov ၏ဒဏ္"ာရီပုံပြင်များကိုဆန်းစစ်ခြင်း - ခေတ်သစ်ကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်တစ်ခု
Ivan Andreevich Krylov ၏ဇာတ်ကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်မျှအံ့အားသင့်ခဲ့ကြရသည်။ ကျောင်းနေအရွယ်၌ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုလူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပုံနှင့်သူ၏ဒဏ္ofာရီများဥပမာကိုလေးစားရုံမျှသာဖြစ်သည်။
Zhukovsky ရဲ့ကဗျာ "The Untold" ၏သုံးသပ်ချက်။ သင်၏ခံစားချက်များကိုစကားလုံးများဖြင့်မည်သို့ဖော်ပြမည်နည်း။
အပေါ် Posted 15.09.2019 18.12.2019
Vasily Andreyevich Zhukovsky သည် ၁၉ ရာစုအစပိုင်းတွင်ဥရောပ၌သာပျံ့နှံ့ခဲ့သောရုရှားစာပေ - စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုသို့လမ်းညွှန်အသစ်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ကဗျာဆရာကဒီအမျိုးအစားရဲ့ရိုးရှင်းမှုနဲ့ကျက်သရေကိုလေးမြတ်တန်ဖိုးထားပြီး ...
Voloshin Maksimilian Aleksandrovich: အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဖန်တီးမှုအမွေအနှစ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Voloshin Maximilian (ဘဝသက်တမ်း - 1877 - 1932) - ကဗျာဆရာ၊ အနုပညာရှင်၊ အနုပညာဝေဖန်ရေး၊ စာပေဝေဖန်ရေးသမား။ Voloshin သည်အမည်ဝှက်ဖြစ်သည်။ သူ၏အမည်ရင်းမှာ Kiriyenko-Voloshin ဖြစ်သည်။ ကလေးဘဝ၊ ကျောင်းသားနှစ်များအနာဂတ်ကဗျာဆရာသည်မွေးဖွားခဲ့သည်။
တကျိပ်နှစ်ပါး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု ကဗျာ၏အကျဉ်းချုပ်
Block ၏ကဗျာ "Twelve" သည်ယခုနှစ် 1918 တော်လှန်ရေးပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တကယ့်အဖြစ်အပျက်များ (အအေးမိခြင်း၊ လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်မီးပုံများ၊ မြို့လမ်းများပေါ်တွင်ကြည်းတပ်နီမှကင်းလှည့်ခြင်း၊ မိန့်ခွန်းများ၊ ပုံမှန်အတိုင်း) ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
A.S. Pushkin ။ “ ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ မျက်လုံးခုံ! "
ငါတို့နိုင်ငံတွင်နာမည်ကျော်ကဗျာတစ်ပုဒ်“ ဆောင်း ဦး ရာသီ” (“ အောက်တိုဘာအောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်”) ကိုလူတိုင်းသိသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မဟုတ်နှလုံးအားဖြင့်ပေမယ့်လိုင်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲလိုအပ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးစကားစုအချို့ကိုအထူးသဖြင့် ...
ထိုကဲ့သို့သောအတွေးများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်နားလည်သဘောပေါက်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယုတ္တိဗေဒအစီအစဉ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်နှင့်ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစသည်တို့သည်ရေးသားထားသောအငြင်းပွားမှုများကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ကျောင်းသားများသည်ဤကျွမ်းကျင်မှုကိုဤကဲ့သို့သောစာဖြင့်ရေးသားထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ရုရှားမသန့်ရှင်းခြင်း…” Lermontov၊ “ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ရုရှားမသန့်ရှင်းခြင်း” - ဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်း၊ ကဗျာကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
Lermontov သည်သူ၏အချိန်မခြားမလပ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဘဝ၏နောက်ဆုံးနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ စာပေအခွက်တဆယ်ပန်းပွင့်၏ထိုအချိန်က။ ဤရွေ့ကားရိုးရှင်းသောရှစ်လိုင်းများနီးပါးအများဆုံးမှတ်မိကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ကြသည် ...
Oster ဂရက်ဂိုရီ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကလေးများအတွက်
Oster Grigory Bentsionovich သည်ရုရှားနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်ထင်ရှားသည်။ သူရေးသားသောစာအုပ်များကိုကလေးနေထိုင်သောအိမ်တိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သူတို့ကအားလုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း၏စင်ပေါ်ပေါ်မှာ ...
အမ် Sholokhov, "လူသား၏ကံကြမ္မာ": ပြန်လည်သုံးသပ်။ "လူသား၏ကံကြမ္မာ": အဓိကဇာတ်ကောင်များ၊ အကြောင်းအရာ၊ အကျဉ်းချုပ်
ဒီဇင်ဘာလ 1956 နှင့်ဇန်နဝါရီ 1957 တွင် Pravda သတင်းစာကဆိုဗီယက်စာရေးဆရာ Mikhail Alexandrovich Sholokhov ၏ "လူသား၏ကံကြမ္မာ" ၏ကြီးမားသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဆိုဗီယက်လူမျိုးများ၏ကြီးလေးသောရှုပ်ထွေးမှုများကိုရေးသားခဲ့သည်။
Ryleyev Kondraty Fedorovich သည်အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကိုအောက်တွင်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပြီးရုရှားသမိုင်းနှင့်စာပေတို့တွင်အံ့သြဖွယ်ရာအမှတ်အသားတစ်ခုကျန်ခဲ့သည်။ သူသည် A.S. Pushkin နှင့် A.S. Griboedov တို့နှင့်နီးကပ်စွာရင်းနှီးခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ...
V.P. Astafiev, "Vasyutkino ရေကန်": အလုပ်၏စာမျက်နှာများ
V.P. Astafyev သည်ရုရှားဆိုဗီယက်စာပေ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအတိုင်းအတာဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ လူနှင့်သဘောသဘာဝ၊ လူနှင့်စစ်၊ ကျေးရွာဘဝ၊ ဂေဟဗေဒ ...
အာသာ Conan ဒို, The Lost World အကျဉ်းချုပ်
စာဖတ်သူအများစုအတွက် Arthur Conan Doyle သည်စုံထောက်ဇာတ်လမ်းများကိုရေးသားသူဖြစ်ပြီးစုံထောက် Sherlock Holmes ၏စာပေဖခင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူ၏အကောင့်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအခြားအမှုများလည်းရှိသည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု, sincwain: ရုရှားဘာသာစကားနှင့်စာပေ၏သင်ခန်းစာများအတွက်အသုံးပြုမှုဥပမာ
Hans Christian Andersen ၏နှင်းဘုရင်မ၏အကျဉ်းချုပ်
မျိုးဆက်များစွာအတွက်စာဖတ်သူများသည်ဤပုံပြင်သည်ချစ်မြတ်နိုးရဆုံးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်စာရေးဆရာ Hans Christian Andersen ၏ "The Snow Queen" ၏အနှစ်ချုပ်သည်များစွာသောလူကြီးများမှကလေးငယ်များနှင့်လူကြီးများကိုပြန်လည်ရောင်းချနိူင်သည်။
"ဟုအဆိုပါ kennel မှာ Wolf ။ " ဗြဲအေ Krylov ၏ဒဏ္.ာရီ
ထိုကဲ့သို့သောဒဏ္fာရီကဲ့သို့သောစာပေအမျိုးအစားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 4000 အစပြုခဲ့သည်။ လိမ္မာပါးနပ်သောပုံဆောင်ဇာတ်ကြောင်းတွင်အဓိကအယူအဆဖြစ်သောကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားကိုရုရှားစာပေများသို့ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးအိုင်ဗန်အန်ဒရီဗစ်ချ်ခရလစ်ကပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ ...
“ The Lone Sail Whitens” - အကြိုက်ဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
M. Yu ။ Lermontov သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရုရှားကဗျာနှင့်စာပေ၏အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ သူ၏စကားလုံးကျွမ်းကျင်မှု၊ လိုင်းများ၏ကဗျာနှင့်စကားလုံးတစ်လုံးစီတွင်တွေ့ရခဲသော ၀ မ်းနည်းမှုသည်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ရောနှောနေသည်။
A. အက်စ် Pushkin, "ဝန်ခံ": ကဗျာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Alexander Sergeevich Pushkin“ အသိအမှတ်ပြုခြင်း” သည် 27 နှစ်အရွယ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဒီကဗျာကိုသူ့ဂီတတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alexandra Osipova ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ အခြားသောတီထွင်ဖန်တီးရှင်များစွာလိုပဲ Pushkin ဟာအလွန်အမင်းချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
နက်ရှိုင်းသောကဗျာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Balmont "Verbosity"
တစ်ချိန်က Konstantin Balmont သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်သူ၏ကဗျာများသည်မျိုးဆက်သစ်များကိုနှစ်ခြိုက်ကြပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းများရှိတတ်သည်။ Balmont ၏အကျင့်များသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နှင့်စာသားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးနူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်နုပျိုမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Andrey Usachev - ကလေးစာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာနှင့်စကားပြေစာရေးဆရာ
Andrei Usachev သည်ကလေးစာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာနှင့်စကားပြေစာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူသည်စာပေအသိုင်းအဝိုင်းများ၌ခဲယဉ်းသောအချိန်ကာလများတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးကောင်းမွန်သောအခန်းငယ်များကိုဖန်တီးပြီးသီချင်းများလည်းရေးသားခဲ့သည်။ အခြားစာရေးဆရာ ...
အမ်ယု။ Lermontov ။ စာရေးဆရာတစ် ဦး ၏ဘဝမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များ
ရုရှားစာပေကိုနှစ်သက်သောမျိုးဆက်တစ်ဆက်အတွက်အမ် Lermontov ၏ဘဝသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူမ၏အချိန်လေးအချို့သည်လျှို့ဝှက်နက်နဲစွာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ များစွာသောဖြစ်ရပ်များ, ဖုံးလွှမ်းလျှင်, ထို့နောက် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,319 စက္ကန့်ကျော် Generate ။